blog Archives - Vanille Naturelle Madagascar
Vanille Naturelle Madagascar > blog
0 Comments By admin-stoi blog, new, NEWS
Vary Safiotra – Aparitaky ny Groupe STOI : VAHAOLANA AMIN’NY FAHAVITAN-TENA ARA-BARY
Vahaolana lehibe miantoka ny fahavitan-tena ara-tsakafo ity vary safiotra na Riz Hybride hoentin’ny Groupe STOI eto amintsika ity. Satria dia miakatra ny tahan’ny famokarana raha mihoatra amin’ny voly vary mahazatra.
« Mahatratra hatramin’ny 8 hatramin’ny 12 Taonina isaky ny hektara ( 8 à 12 T/Ha ) ny vokatra amin’ity voly vary safiotra ity. Mazava ho azy fa hitombo koa ny vola miditra amin’ilay tantsaha rehefa miakatra ny vokatra. Miantoka ny fahavitan-tena ara-tsakafo io Vary Safiotra io na Riz Hybride, ary heverinay fa tena vahaolana lehibe ho an’ny firenena. Haparitaka manerana ny Faritra izy io ary entanina ny rehetra hamboly azy. Efa nandritra ny 2 taona izahay no namboly ny masomboly mba ho eto an-toerana ihany dia mahazo izany. Taloha mantsy nafarana izy io kanefa lafo », araka ny fanazavan’ny Tompon’andraikitry ny Serasera eo anivon’ny Groupe STOI – Tahiana RAZANAMAHEFA – teo amin’ny Stand izay nisy azy, tetsy amin’ny FIM Forello Tanjombato io maraina io.
Isan’ireo mandray anjara amin’ny FIM 2021 tokoa ny Groupe STOI. Mivelatra amin’ny sehatra maro izy ireo, isan’zany ny Fampianarana, ny Fizahantany, ary ny Fambolena.
Mikasika ny fanapariahana an’ity Vary Safiotra ity, dia miara-miasa amin’ny ministeran’ny Fambolena izy ireo ary miara-miasa amin’ny tompon’andraikitra eny ifotony ihany koa. « Tao anatin’izay roa taona nanaovanay andrana izay dia nitombo hatrany ny tantsaha te hampiasa an’io voly vary safiotra io. Ankehitriny dia miezaka izahay ny hanantona azy ireo satria tena tsapa fa mamaha olana maro izy io. Raha mahavita mamboly azy avokoa ny tantsaha rehetra, dia antenaina fa hahaleotena ara-tsakafo isika » , hoy hatrany Tahiana RAZANAMAHEFA nandritra ny hetsika FIM.
Tojo Ramilianta & Manda R.